२०७७ मंसीर २ गते , मंगलवार प्रकाशित
कालिदास एकपटक भ्रमणको क्रममा एउटा गाउँमा पुगे । उनी एकदमै तिर्खाएका थिए । एउटा घरको ढोकामा पुगेर उनले पानी मागे । ढोकामा उभिएकी एक युवती र ज्ञान हासिल गरेर चर्चित भइसकेका कालिदासको बीच रोचक संवाद भयो ।
कालिदास : कृपया, पानी दिएर पुण्य कमाउनुहोस् । युवती : मैले तपाईंलाई चिनेकै छैन । पहिला आफ्नो परिचय दिनुहोस् । म अवश्य पानी दिनेछु ।
कालिदास : म पाहुना हुँ, कृपया पानी दिनुहोस् । युवती : तपाई कसरी पाहुना ? संसारमा त दुईवटा कुरा मात्र पाहुना हुन्छन् । एउटा धन र अर्को यौवन । यिनीहरु आउन र जानमा समय लाग्दैन । सत्य कुरा भन्नुहोस् खासमा तपाई को हुनुहुन्छ ?
युवती : फेरि झूठ । हठी त नङ र कपाल हुन् । जति काट्नुहोस् पटक(पटक आउँछन् । सत्य कुरा भन्नुहोस् यहाँ को हुनुहुन्छ ?
युवती : होइन, तिमी मूर्ख कसरी हुन सक्छौ । मूर्ख त दुई हुन्छन् ( पहिलो, राजा जसले आफ्नो अयोग्यताको बावजुद पनि योग्यहरुमाथि शासन गर्छन् र अर्को मूर्ख दरबारका पण्डित हुन् जसले राजालाई खुसी बनाउन गलत तर्क गरेर पनि झूठलाई सही सावित गर्न खोज्छन् । (केही पनि बोल्न नसकेपछि कालिदास युवतीको पाउ परे र पानी माग्न थाले)
युवती : उठ्नुहोस् महानुभाव ! (आवाज सुनेर कालिदासले माथि हेर्दा त उनी साक्षात् सरस्वती रहिछन्, अनि कालिदास झन नतमस्तक भए) सरस्वतीले भनिन् : शिक्षाबाट ज्ञान हासिल गर्नु पर्छ न कि अहंकार । तपाईले शिक्षाको बलबाट प्राप्त गर्नुभएको मान र प्रतिष्ठालाई नै आफ्नो उपलब्धि मान्नुभयो र घमण्ड गर्नुभयो । यसकारण तपाईको तेस्रो नेत्र खोल्न म यहाँ आएकी हुँ । कालिदासले आफ्नो गल्ती महसुस गरे र टन्न पानी पिएर फर्किए । शिक्षा : विद्वत्तामाथि कहिल्यै घमण्ड नगर्नुहोस् । यही घमण्डले तपाईको विद्वत्ता नष्ट गरिदिनेछ ।